Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/aina
Ohabolana 68 Aina ity, hoy Rainimanonja . [Rinara 1974]
Ohabolana 129 Akoholahy mitelin-koto : raha mahay mitelina dia tohan' aina , raha tsy mahay dia singotry ny lela . [Veyrières 1913 #3537]
Ohabolana 224 Aleo mamonjy aina , hanaiky na handositra , fa manao vy manidina Andriamanelo . [Veyrières 1913 #63]
Ohabolana 294 Amboa homana ondry , ka ny aina no manefa . [Veyrières 1913 #4268]
Ohabolana 367 Ampinga ravin-tsaonjo : voafina ihany ny tarehy , fa tsy voafefy ny aina . [Cousins 1871, Veyrières 1913]
Ohabolana 437 Andevolahin' ny hariana ny aina . [Veyrières 1913]
Ohabolana 524 Angady tokana ny aina : raha tapaka tsy misy hasolo azy. [Cousins 1871 #228, Nicol 1935 #464]
Ohabolana 665 Arahaba tsy maty fo aman' aina . [Veyrières 1913]
Ohabolana 972 Aza manao an-tenin’ aina . [Houlder 1895 #421, Cousins 1871 #419]
Ohabolana 1453 Aza mitoe-mamokaiky , fa ataovy izay tratry ny aina . [Cousins 1871 #662]
Ohabolana 1455 Aza mitomany handatsaka aina , toa bala. [Houlder 1895 #522]
Ohabolana 1528 Aza tanora be sondrotr' aina , fandrao ho faty alohan' ny marary . [Veyrières 1913 #2784]
Ohabolana 1529 Aza tanora be sondrotr' aina , fandrao tsy misy ho enti-miantitra . [Veyrières 1913 #2591, Cousins 1871]
Ohabolana 1573 Babin-katsaka an-tany mena , ka ny baby roa tsy misy fa raha mahatana ny aina dia zara . [Rinara 1974 #841]
Ohabolana 1580 Balan--tsakaiza ka anivon' ny aina indrindra. [Rinara 1974 #844]
Ohabolana 1673 Bibilava vonoina , ka tsy tongotra hitsipaka , tsy tanana handrangotra , tsy vava hiteny, fa todin' aina no andrasana . [Rinara 1974]
Ohabolana 1711 Boka misikidy : ny tokin' aina dia lavorary fa ny aretina no manapa-kozatra . [Rinara 1974 #63]
Ohabolana 1720 Boka namahan-jaza : natao hamelona kanjo nanampina ny aina . [Rinara 1974 #931]
Ohabolana 1859 Efa an-dohariana ny aina . [Veyrières 1913 #2851]
Ohabolana 2041 Fary lanim-boana , mitsangan-tsy amin' aina . [Samson 1965 #F16]
Ohabolana 2106 Firain' ny vava fito saha; firain' ny harem-boantondro . [Houlder 1895 #802]
Ohabolana 2144 Fofo-nahandro ny aina , ka tsy hita izay ahalevonany . [Veyrières 1913 #2761, Cousins 1871 #977]
Ohabolana 2145 Fofo-nahandro ny aina : raha sokafana , dia lasa. [Veyrières 1913 #2762, Cousins 1871 #978]
Ohabolana 2444 Hoatry ny tehina an-tanan' ny mpihaingo , ka sady haingo no tohan' aina . [Veyrières 1913 #2430]
Ohabolana 2637 Izay andro ahoriana , tsaroan' ny aina . [Rinara 1974]
Ohabolana 2652 Izay iray vatsy iray aina . [Cousins 1871 #1181, Nicol 1935 #407]
Ohabolana 2654 Izay kely fihinana kamo fila aina . [Cousins 1871 #1183]
Ohabolana 2662 Izay maharary no itoeran' ny aina . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 2686 Izay manoro lala-mahitsy , mamindra aina . [Veyrières 1913 #6503, Rinara 1974]
Ohabolana 2701 Izay no takatry ny aina hoy ilay nahandro takatra . [Rinara 1974]
Ohabolana 2877 Kely tsaroan' ny aina ohatra ny voan' ny somisika . [Rinara 1974]
Ohabolana 2969 Lahiantitra mitehin-kiho : tsy haingo fa tohan' aina . [Rinara 1974 #1676, Cousins 1871, Veyrières 1913]
Ohabolana 3459 Manafaingana tena toy ny marary be tsy homan-kanina . [Veyrières 1913 #2800]
Ohabolana 3530 Manao ain- kavana . [Veyrières 1913 #1094]
Ohabolana 3580 Manao mosalahy ny aina . [Veyrières 1913 #6295]
Ohabolana 3581 Manao ny ain- tsy ho zavatra. [Veyrières 1913 #6298]
Ohabolana 3621 Manao very tena ; mahafoy ny aina . [Veyrières 1913 #6297]
Ohabolana 3623 Manao vy very ny aina , ka manao jirik' aina mitady izay hafatesana . [Veyrières 1913 #6299]
Ohabolana 3741 Mandrodona am-pasina : very ton’ aina . [Samson 1965 #M52]
Ohabolana 3763 Mangahazo anaty tenona : mitondra lefona an-kibo , miferin-aina andro aman-alina , velona fa manana aina . [Veyrières 1913 #2618, Cousins 1871 #1612]
Ohabolana 3947 Maty an-tsoron' aina . [Veyrières 1913 #2871]
Ohabolana 4017 Menaky ny aina . [Veyrières 1913 #978]
Ohabolana 4036 Miala aina hanadio ny sasany tahaka ny savony . [Rinara 1974 #2241]
Ohabolana 4139 mifanena an-kentona , ka samy miaro ny ainy ihany. [Houlder 1895 #1172]
Ohabolana 4171 Mihazakazaka ambany farafara ka tsy misy hanam-parana ny aina . [Rinara 1974 #2315, Cousins 1871 #1767]
Ohabolana 4379 Mitari-bato tsy mihoraka : very ny androatokon' aina . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 4390 Mitehin-kiho am-piakarana , ka sady haingo no tohan' aina . [Rinara 1974 #2448]
Ohabolana 4583 Mpamosavy mitravoka : manary fanahy ny tompon’ aina . [Samson 1965 #M135]
Ohabolana 4688 Na dia kely aza, tsarotsaroan' ny aina , hoatry ny fahenim-bary fahavaratra . [Veyrières 1913 #2767]
Ohabolana 4707 Nahoana hianao no manara-binanto ? ka hoy izy : " ny aiko aza lasany " . [Veyrières 1913 #1456, Rinara 1974 #2660, Cousins 1871 #2025]
Ohabolana 4811 Natao ho ranonorana ho tohan’ aina , ka nivadika ho havandra hanorotoro . [Nicol 1935 #493]
Ohabolana 4812 Natao ho salaka hanohana ny aina , kanjo nitondra haofotsy hanaikifra ny valahana. [Rinara 1974 #2759]
Ohabolana 4814 Natao ho vady hialana aina , kanjo tsy azo hianteherana akory. [Veyrières 1913 #1387]
Ohabolana 4857 Ny aina aloka aman--javona : mihelina dia lasa . [Houlder 1895 #2093]
Ohabolana 4858 Ny aina hoatry ny fanjozoro : ka izay mahavatra mampando no manana ny mafy . [Veyrières 1913 #2768]
Ohabolana 4859 Ny aina raha lasa tsy mba miverina . [Rinara 1974]
Ohabolana 4860 Ny aina Ramangatahina , ny vola Ramangatadiavina . [Rinara 1974 #182]
Ohabolana 4861 Ny aina toy ny tavim-bilany , ka tsy fantatra izay hahavakiany , na ho antoandro na ho alina . [Houlder 1895 #2092, Veyrières 1913 #2769]
Ohabolana 4863 Ny aina tsy ananam-piry . [Veyrières 1913 #2891]
Ohabolana 4864 Ny aina tsy mba bozaka , ka raha maina ny lohany dia maniry indray ny fakany . [Rinara 1974 #2835]
Ohabolana 4865 Ny aina tsy mba landihazo : raha antoandro ny andro mibo-haka. [Veyrières 1913 #2771, Cousins 1871 #2129]
Ohabolana 4903 Ny amboa no be aina , fa raha voky ran-kena , mandry ilalana . [Houlder 1895 #824, Veyrières 1913]
Ohabolana 4947 Ny andriana tsy mba itsitsiana ny aina . [Veyrières 1913 #379]
Ohabolana 5112 Ny fitia tsy hanjary ve no andritana aina ? [Rinara 1974 #3005]
Ohabolana 5153 Ny harena no tian-kananana , ka ny aina no atao tsy ho zavatra. [Rinara 1974 #3033]
Ohabolana 5500 Ny sandry be tsy ody aina , ary ny hatanorana tsy ody faty; fa samy ho faty avokoa . [Cousins 1871 #2414]
Ohabolana 5609 Nitondra ny tsy araka ny aina , hoatry ny moka voateha-tsofina . [Veyrières 1913 #2731]
Ohabolana 5721 Ny vola Ramangatsimahatola , ny aina Ramangatsiatakalo zavatra. [Rinara 1974 #3362]
Ohabolana 5722 Ny vola tahaka ny volon' orona : tsaroan' ny aina raha anongotana . [Rinara 1974 #214]
Ohabolana 5846 Omby mahia be tandroka ka mitondra ny tsy eran' ny aina . [Rajemisa 1985]
Ohabolana 6055 Raha lany ny harena , mihatra amin' ny aina . [Veyrières 1913 #2553]
Ohabolana 6216 Rakotr’ aina , rako-paty . [Samson 1965 #R16]
Ohabolana 6274 Ranomaso tsy mahatana aina . [Cousins 1871 #2758, Nicol 1935 #164]
Ohabolana 6328 Reniakoho fatora-mahazaka , ka mitondra ny tsy eran’ ny aina . [Veyrières 1913 #857, Rinara 1974 #3744, Cousins 1871 #2781]
Ohabolana 6503 Sandry be tsy hery; fahatanorana tsy ody faty. [Houlder 1895 #1928]
Ohabolana 6572 Sikidim-boka , ny tohan' aina : miziriziry , ny aretina toa hanapa-kozatra . [Rinara 1974 #3878]
Ohabolana 6588 Singam-bolo tsy mahafehy faty. [Houlder 1895 #2104, Nicol 1935 #168]
Ohabolana 6669 Sombin' aina . [Veyrières 1913 #1002]
Ohabolana 6920 Taon-jezika an-kady ka aina no fetra . [Veyrières 1913 #3752, Houlder 1895, Rinara 1974]
Ohabolana 6923 Tao-zava-drafozana : avo roa toko ny aina . [Veyrières 1913 #1477]
Ohabolana 7003 Tenin’ aina , tahaka ny salakan’ Atsimon-drova . [Cousins 1871 #3078]
Ohabolana 7303 Torimason- jamba : aina no fetra . [Cousins 1871 #3151, Nicol 1935 #173]
Ohabolana 7494 Tsy jabany ny ainy . [Veyrières 1913 #6327]
Ohabolana 7499 Tsikin' olon-tiana , ka sady toky no vahatry ny aina . [Rinara 1974]
Ohabolana 7608 Tsy mba ny miray donak' afo , fa ny miray ombon' aina . [Rinara 1974 #4557]
Ohabolana 7730 Tsy misy be aina noho ny alika , fa raha manodidina any Itasy , valaka . [Cousins 1871 #3509]
Ohabolana 7731 Tsy misy be aina noho ny alika , fa raha voky ran-kena , mandry lalana . [Cousins 1871 #3510]
Ohabolana 7857 Tsintsina mitondra sompanga : ny taona dia zina , fa ny kibo hasiana no tsy misy. [Cousins 1871 #3320]
Ohabolana 7916 Tsitsio ny harena , fa tsy mifamotoana ny ainao sy ny faharetany . [Veyrières 1913 #2412]
Ohabolana 8148 Veloma fo aman' aina . [Veyrières 1913 #4178]
Ohabolana 8181 Very vahatry ny aina , tahaka ny maty zanaka lahi-matoa . [Rinara 1974 #4947]
Ohabolana 8224 Vitsika nahazo valala : tonga ny entana , fa ny vava no tsy omby . [Houlder 1895 #637]
Ohabolana 8250 Voalavo mihazakazaka an-kentona : tsimbino ny aina , fa lavitra hianjerana . [Veyrières 1913 #6262, Cousins 1871 #3693]
Ohabolana 8315 Volon-katsaka misakan-tadio , ka manohana ny tsy eran' ny ainy . [Houlder 1895 #910]
Ohabolana 8342 Voromahery miongo-bolo : ny aina be ihany, fa ny ho enti-manidina no tsy misy. [Veyrières 1913 #697, Rinara 1974 #5037, Cousins 1871]